About Us - Ningbo Wegro Ankizy Products Co., Ltd
Zaza fiara seza Gr0 + (0-13kg)
mahafaly andro anaovana Basic
mahafaly andro anaovana Plus
Baby fiara seza Gr1 + 2 (9-25kg)
Baby fiara seza Gr1 + 2 + 3 (9-36kg)
Child Booster seza Gr2 + 3 (15-36kg)
Baby fiara seza Gr0 + 1 + 2 + 3 (0-36kg)
Baby Belt lafika
Vozony fanohanana lafika
Fanaovam-panavotana indray Mpiaro
Fehikibo miaro amin'ny loza adjuster
WE02 mpitaingin-tsoavaly & hanaiky
WE01 Gallatn patanty
WE01 Herim ECE CERT
ny vondrona mitovy fisainana ny olona tena nahay amin'ny famolavolana sy ny injeniera ny ankizy fiara fanaovam-panavotana dia tonga alefa amin'ny fahitana iray mba ankizy dia azo antoka ao amin'ny fiara.
Isaky ny foto-kevitra vaovao nivoaka, raha tsy mbola tonga saina izany, dia hanao be dia be ny fanadihadiana, fikarohana, ary andrana fianjerana fitiliana mba hanaporofoana ny foto-kevitra iray dia azo antoka. Ary ny ekipa no hanazavana ny famolavolana vahaolana mba hahatakatra ny hevitra ho vokatra eo ambany fiarovana avo indrindra fitsipika.
Raha misy vokatra no nankatoavina ary voaporofo ho soa aman-tsara, ny famokarana sy ny famatsiana ireo singa manan-danja ho fiarovana amin'ny seza. Ao Wegro, isika hanaraka ny henjana mpamatsy & kalitao fitantanana mba hahazoana antoka seza tsirairay Izahay no Namoaka tonga ny voalohany famolavolana fepetra takiana.
Wegro dia nanao ny tsy azo antoka, tompon 'andraikitra sy ny fiarovana ny ankizy kaja fiara mpamatsy seza!
Inona no lanja
People - isika hoe "mpikambana ao amin'ny ekipa" fa tsy "mpiasa". Isika dia manome lanja ary manohana ny mpikambana ao amin'ny ekipa ho toy ny fifaninanana tombony. Miezaka isika ny misarika, hanana, hihazona sy handrisika ny olona manan-talenta indrindra afaka mahita, ny olona izay miahy sy izay miara-miasa toy ny mpiara-miasa.